Ukucocwa Kwe-Ultrasonic Wire - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukukhiqiza ucingo nentambo, izinduku, ompompi, amashubhu kanye nama-fasteners kudinga ukuthambisa. Ngaphambi kokuba kuqhutshekwe kusetshenzwe, okufana nokuhlanza, ukukhipha noma ukufaka i-welding, izinsalela zokugcoba zidinga ukucishwa. I-Hielscher Ultrasonics ikunikeza inqubo eyingqayizivele yokuhlanza i-Ultrason yokuhlanza kahle i-inline.
Ultrasonic Wire Cleaning – Unamandla futhi unokwethenjelwa
Ukuhlanza i-Ultrasonic kuyindlela enobungani yemvelo yokuhlanza izinto eziqhubekayo, ezinjenge-wire kanye nentambo, itayipu noma amashubhu. Umphumela we-cavitation okhiqizwa amandla e-ultrasonic ususa izinsalela zokugcotshwa njeng amafutha noma amafutha, amasobho, ama-stearates noma uthuli. Ngaphezu kwalokho, izinhlayiya zokungcola zihlakazeka emanzini okuhlanza. Ngalokho, ukunamathela okusha kwento okumele ihlanjululwe kugwenywe futhi izinhlayiya zixotshiwe.
Ultrasonic Cleaning – isimiso sokusebenza
Ngokusetshenziswa kobuchwepheshe obusha obunjiniyela be-ultrasonic, kakhulu izinsimu ezinamandla ze-cavitation zikhiqizwa, ngakho-ke imiphumela emihle yokuhlanza ezisezingeni eliphezulu ingafinyelelwa. Njengoba umphumela wokuhlanza usekelwe emiphumeleni yokuhlanza ngokomzimba ye-ultrasound, ingasetshenziswa noma yikuphi ukwaziswa okunezinsimbi okungezona okufayo, isib. insimbi engagqwali, ithusi, i-aluminium, kodwa futhi iphlastiki noma ingilazi. Imishini evamile yokuhlanza i-ultrasonic isetshenziselwa ucingo olubanjwe, isib. Ngaphambi kokubopha noma ukuxhuma. Ngokugxila kwamandla e-ultrasonic kuya kumthamo ophansi wamanzi, umklamo ohlangene kakhulu ungatholakala. Lokhu kungahlanganiswa kalula kumigqa yokukhiqiza ekhona noma entsha, isib. Ngqo emva kokudweba noma ukubuyisela imali.
I-cavitation ingumphumela, owenziwe uketshezi ngamagagasi amakhulu a-ultrasonic. Amagagasi akhangela adala ama-bubbles avulekile, awakhuthaza kamuva. Ngenxa yalezi zimpendulo, izingcindezi eziphakeme kakhulu namazinga okushisa kwenzeka ngokuhambisana nama-jets e-liquid afika ku-1000km / h. Ezingxenyeni, lezi zindlela zokugcoba zikhulula ukungcola, ngakho-ke zingasuswa ngogesi. Ukuze uthole i-cavitation ejulile – futhi yilokho ukuhlanzwa okujulile – Amaplitudes aphezulu kanye nemvamisa ephansi ye-ultrasonic (cishe 20kHz) ayadingeka. Isithombe ngakwesokudla sibonisa i-cavitation enamandla eketshezi eyenziwe ngamamojula e-ultrasonic we-Hielscher Ultrasonics.
I-Hielscher DRS3500 iyindlela enamandla yokuhlanza i-wireless ne-cable yokuhlanza ngokushesha nangokuphumelelayo izinto zokuqhubeka okuqhubekayo ezinjengezintambo, izintambo, izinduku.
I-ultrasonic Wire kanye neChethre Cleaning System DRS3500
Izinhlelo Zokuhlanza Izintambo Nezintambo
I-compact design iqukethe konke okudingekayo ukuhlanza ucingo noma itheyipu. Ngaphezu kwalokho, i ukuhlanza amathangi, amaphampu, ama-heaters, ama-filters nama-skimmers, ama-air-wipe wokumiswa kokugcina kufakwe ohlelweni, futhi. Uhlelo lonke lokuhlanza luyi enziwe ngensimbi engagqwali, ngakho-ke azikho izinkinga zokubola.
Isembozo sokuvikelwa komsindo sinciphisa ukukhishwa kwezwi ezingeni elingezansi kwemingcele evamile yezizwe zomhlaba wokukhiqiza. Ukusebenza kwebhukwana kuncishiswe kube ubuncane bokuhamba okungahambi kahle nokushintshwa, ukuze ususe umsebenzi opharetha. Ukuvuselelwa ketshezi ngaphakathi kwesistimu kuvumela ukusetshenziswa kwesikhathi eside kweziphuzo zokuhlanza. Lokhu kuhlangene nokuguqulwa okuphumelelayo kwamandla kagesi ukuhlanzwa kwemishini kuthuthukisa ukulinganisela kwemvelo kwesistimu ephelele.
Yenzelwe Izidingo Zakho
Idizayini eyenziwe ngokwezifiso ihlinzekela ukulungiswa okuhle kwesistimu kuya kwezidingo zenqubo ethile yokuhlanza. Kububanzi obuvela kumamojula ngamanye ukuhamba okuphansi okuhlanza kuya ekuhlanzeni okusheshayo izinhlelo ezihlukahlukene zokuklama kungenzeka. Ngaphandle kwamandla afanele e-ultrasonic kanye ne-PLC yokulawula okuzenzakalelayo kokusebenza, izici, njenge-geometry yesistimu ephelele zingashintshwa ukuze zivunyelwe izimo zesikhala noma izinsika ezithile zezintambo. Ngaphezu kwalokho, amadivaysi okomisa akhethekile atholakala ngokuzithandela, uma ukuma emoyeni ocindezelweyo kungenele ucingo oluthile.
Uhlelo lwe-TCS1200 lwe-Ultrasonic lokuhlanza luyikhambi elinamandla nelisebenzayo lamateyipu ahlanzekile nezinye izinto ezingapheli ezifakwa ngaphakathi.
ultrasonic tape yokuhlanza uhlelo TCS1200
Processors Ultrasonic ne-Sonotrodes
Amaprosesa ase-ultrasonic aklanyelwe ukusetshenziswa komsebenzi wezindakamizwa. Zinekhono eliphakeme ekuguqulweni kwamandla kagesi ukuze kuqhutshwe ama-mechanical oscillations. Zakhiwa ukusebenza ngokuqhubekayo; futhi basakaza ubufakazi bomanzi – uma kwenzeka nje. Amandla abo ngabanye afika ku-4000 Watts avumela ama-amplududes aphezulu kakhulu, okudingekayo ukuze ahlanzeke ngempumelelo. Inombolo yamadivaysi e-ultrasonic adingekayo, kuncike kwinombolo nobubanzi bezingcingo zokuhlanzwa, kanye nokungcola kwabo, kanye nesivinini somugqa oyifunayo. Sizokujabulela ukukusiza kule ndaba, ngesisekelo sohlangothini lwethu olujulile ekuhlanzeni ucingo. I-sonotrodes yasungulwa futhi yenzelwe umsebenzi okhethekile wokuhlanza amaphrofayli aqhubekayo, njengezintambo noma amatheyipu. Amandla e-ultrasonic agxila eketsheni elizungezile ucingo endaweni yokuhlanza. Lokhu kubangela ukuqina okukhulu kwamandla okufika ku-100 Watts ngamentimitha angu-cubic. Amabhati ajwayelekile e-ultrasonic azuze angaphezu kuka-0.02 Watts ngamentimitha angu-cubic. Ngokuvamile, ububanzi be-bore kufanele bube bubanzi obuyi-3 kuya ku-4mm kunesiqephu esiphambene nesigcawu sokuhlanzwa. I-sonotrodes yethu evamile iyakwazi ukuhlanza izintambo ezingu-32mm. Izinto ezinkulu kanye nobubunjwa obukhethekile zingacocwa yizinklamo ezithile zenkambiso.
Amakhemikhali e-sonotrode akhethekile avumela ukuhlanza ngesikhathi esisodwa kwezintambo eziningana ohlelweni olulodwa. Ngakho-ke ama-sonotrode afanele afakwe kuhlelo olujwayelekile. Isimiso sokuhlanza – ngakho-ke amandla okuhlanza afana nalawo amasistimu okuhlanza komugqa owodwa. Ukukhethwa kwe-sonotrode efanele kunqunywa inani lezintambo nobukhulu bomuntu ngamunye. Ngaphezu kwalokho, i-sonotrodes ephansi ingasetshenziswa ekuhlanjuleni amathane amakhulu noma izintambo eziningi ezifanayo. Ngenxa yalokhu, i-sonotrodes ifakwe ngenhla futhi ngaphansi kwezinto ezibonakalayo. Ngalesi simiso, kungenzeka ukuhlanza indwangu yocingo noma i-wire mesh, futhi.
Ukufakwa kwe-plug-and-Play nokusebenza
Ezikhathini zethu ze-DRS, izifunda zamanzi eziphelele ngaphakathi kwesistimu zinikeza amamojula wokuhlanza nokuhlanza nge-liquid. Isimiso sokuhlanza nokuhlanza sihlukaniswa komunye nomunye. Isifunda ngasinye sinezihluzo zokuhlunga, ezikhipha izinhlayiya ziketshezi. Ngaphezu kwalokho, isifunda sokuhlanza singahlonywa nge-skimmer yamafutha. Ukuze kusetshenzwe ngempumelelo ama-circuits kufakwe izinto zokushisa. Lezi zifunda ezimbili nokucubungula ama-aggregate zihlanganiswe ohlelweni lwesistimu. I-footprint yezinhlelo ezijwayelekile zilinganisa u-1500mm kuphela noma u-2000mm ngobude no-750mm ububanzi. Ngabo ukuklanywa komklomelo, izinhlelo zingahle zihlanganiswe kumigqa yomkhiqizo esevele ikhona. Isithombe ngezansi sibonisa uhlelo lokuhlanza ucingo ngamathangi amabili.
Uhlelo lokuhlelwa kwenqubo yokuhlanza ucingo i-DRS2000
Izinhlelo zoku Ukusebenza komhlaka 24/7 zinamathangi amabili okuhlanza kanye namathangi amabili okuhlanza. Lokhu kulungiselelwa kuvumela ukugcinwa kwamathangi okukodwa ngenkathi uhlelo lusebenza, ukuze amathangi agciniwe, agcwaliswe futhi athiswe kuze kufike ekushiseni okusebenzayo ngabanye. I-PLC inikeza ukulandelana okubushelelezi kokusebenza ngokushintsha ngokuzenzekelayo phakathi kwamathangi nokugcwaliswa. Ngaphezu kwalokho, ilawula yonke imisebenzi efanele yesistimu iphinde idlulise izibonakaliso zesimo ezihambelana nokulawula okuphakathi kokukhiqiza noma njengolwazi lombhalo ekubonisweni. Izimpawu zokungena kanye neziphumo zingalungiswa nezidingo zamakhasimende.
Izingxenye ozikhethela njengezicathulo zokuhlunga amabhande, amabhulashi noma amamojula akhethekile agcwalisa uhlelo lokuhlanza ucingo. Ububanzi obuningi bezingxenye zokuzikhethela buqinisekisa ukuthi amandla okuhlanza ucingo ahambisana ngokuphelele nezidingo zamakhasimende.
Ulwazi olungaphezulu mayelana nokuhlanzwa kwe-Ultrasonic!